သမ္မတက ကုလနှင့် INGO ဝန်ထမ်းသုံးဦးကို ပြစ်ဒဏ်မှလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေး ရခိုင်ပြည်နယ် မငြိမ်မသက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရတဲ့ ဒေသခံ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းက ၀န်ထမ်း သုံးဦးကို နိုင်ငံတော် သမ္မတက ပြစ်ဒဏ်က လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးလိုက်တယ်လို့ အစိုးရက မနေ့က ကြေညာပါတယ်။ 2012-08-28
နိုင်ငံတော်ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ စေတနာကို နားလည်ကြပြီး မိမိအကျိုး၊ ဒေသအကျိုးနဲ့ နိုင်ငံ့အကျိုး ထမ်းဆောင်သွားစေဖို့ ပြစ်ဒဏ်က လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးတာလို့ ဆိုပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ဆူပူမှု ဖြစ်ပွားရာမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်အောင် ပြောဆိုမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခံရတဲ့ WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်အဖွဲ့က ဦးကာယက်စ်ခေါ် ဦးခင်ရွှေ၊ ဒီ နှစ်မှုအပြင် တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားငွေ လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ကျခံရတဲ့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ၀န်ထမ်း ဦးအဏာဝါ ဆာဒဏ်နဲ့ ဆူပူမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ရုံမက အိမ်မီးရှို့ဖို့ လောင်စာထားရှိမှု၊ တရားမ၀င်ငွေ လက်ဝယ် ထားရှိမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် ကျခံရတဲ့ CSSEP - ရပ်ရွာလူထု ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ဝန်ထမ်း ဒေါ်ချိုလေးမာတို့ကို ပြစ်ဒဏ်က လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးလိုက်တာပါ။
ဒီလို လွှတ်ပေးတာကို ကြိုဆိုပါတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ပြောခွင့်ရသူ Farhan Haq ကပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂက မေတ္တာရပ်ခံတဲ့အတွက် ဆူပူမှုမှာ ပါဝင် ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ တခြား ကုလသမဂ္ဂ ၀န်ထမ်း ၅ ဦးကိုတော့ ဘာစွဲချက်မှ မတင်ဘဲ သြဂုတ်လလယ်ပိုင်းက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဇွန်လက စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအတွင်း လူ ၉၀ လောက် သေဆုံးတယ်လို့ တရားဝင်စာရင်းက ခန့်မှန်းထားပေမဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေကတော့ ဒီထက်မက များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Aug 30, 2012 10:02 PM
Aug 30, 2012 04:59 PM
Rohingya is not one of the ethnic groups of Myanmar at all. We see that the riot happening currently in Buthedaung and Maungdaw of Arakan State is because of the illegal immigrants from Bangladesh called “Rohingya” and mischievous provocation of some international communities. Therefore, such interfering efforts by some powerful nations on this issue (Rohingya issue), without fully understanding the ethnic groups and other situations of Burma, will be viewed as offending the sovereignty of our nation. Aug 30, 2012 03:56 AM
better make no NGO,UNHCR in rakhine state.
Aug 29, 2012 09:06 AM